सुदिप गौतम – Page 20 – RaptiSandesh
Home / Author Archives: सुदिप गौतम (page 20)
जेसी सन्जीता गौतम सन् २००८ मा दाङ लेडी जेसीजको स्थापना सँगसँगै मलाई जेसीजमा प्रवेश गर्ने अवसर प्राप्त भयो । विहे अनि घरायसी जिम्मेवारी र आमा बनिरहँदा हामी महिलाहरु पढाइ सँगसँगै ...
तुलसीपुर,२६ पुस । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–११ मा सुत्केरी आमाहरुलार्इ घरमै सुत्केरी चेकजाँच सेवाको शुरू गरिएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–११ नम्बर वडा कार्यालय उरहरीको आर्थिक सहयोग तथा उरहरी स्वास्थ्य चौकीको प्राबिधिक सहयोग ...
दाङ, २५ पुस । दाङ महिला जेसीजको अध्यक्षमा ममाता विष्ट चयन भएकी छिन् । उनले शनिवार नै अध्यक्षको पदभार समेत गरेकी छिन् । दाङ महिला जेसीजले घोराहीमा आयोजना गरेको १२आंँ ...
लक्ष्मण बस्नेत तुलसीपुर,२५ पुस । रोटरी क्लब अफ तुलसीपुर सिटी र रोट्रयाक्ट क्लब अफ तुलसीपुर को सयुक्त आयोजना मा संचालित खेलकुद सप्ताहको शनिवार एक कार्यक्रम बिच समापन गरिएको छ । ...
दाङ,२५ पुस । नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नं. २ (क)ले घोराहीमा बर्तमान सरकारको असंवैधानिक कदमका विरुद्धमा प्रद्र्धसन गरेको छ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नं. २ (क)ले ...
दाङ, २५ पुस । नेपाल औषधी व्यवसायी संघ दाङको अध्यक्षमा विष्णुप्रसाद पौडेल चयन भएका छन् । संघको शनिवार घोराहीमा भएको भेलाले पौडेलको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय समिति चयन गरेको हो । ...
दाङ,२५ पुस । लुम्विनी प्रदेशका भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले स्थानीय उत्पादनको बृद्धि गरी त्यसको बजारीकरणका लागि प्रदेशका सवै स्थानीय तहमा कोशेली घर स्थापना गर्ने बताएकी छिन ...
लक्ष्मण बस्नेत तुलसीपुर,२३ पुस । दाङको तुलसीपुरमा बिहीवारदेखि खुला भलिबल प्रतियोगिता–२०७७ सुरु भएको छ । स्वतन्त्र युवा क्लब तुलसीपुर ६ राजापुरको आयोजनामा तुलसीपुर अरनिको मैदानमा संचालित प्रतियोगिताको उद्घाटन गण्डकी प्रदेश ...
दिगो विकासका चुनौतीहरू
भूवन पोख्रेल भविष्यका पुस्ताको बाँच्ने आधार नखल्बल्याई वर्तमानका आवश्यकता पूरा गर्नु नै दिगो विकास हो । दिगो विकास एक प्रक्रिया हो । जुन स्रोत साधनको प्रयोग, लगानीको गति तथा दिशा ...